“नाबालिगको संरक्षण गर्नुपर्छ” भन्दा मलाई श्रद्धाञ्जली लेखियो भन्दै रेखाले स्टेजबाटै पोखिन आ’ क्रोश (भिडियो सहित) – Ap Nepal
March 8, 2022 230
रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री र तथा र्निमात्री हुन् । सन् १९९९ मिस नेपालमा सहभागी भएर उनी उत्कृष्ट दस मा पर्न सफल भएकी थिइन् । चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । अभिनेत्री थापाले नबालिग गायिकाको पक्षमा आफूले बोल्दा समाजबाट दुत्कार सहनुपरेको गुनासो गरेकी छन् ।
नायिका रेखा थापाले नाबालिका हाम्रो समाजको दायित्व हो र उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दा आफुलाई ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ लेखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कुराले आफुहरु अझै सतीप्रथामा छौं कि क्याहो जस्तो महुसस भएको बताएकी छिन । महिला दिवसका सन्दर्भमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित सडक बहस कार्यक्रममा बोल्दै रेखाले यस्तो बताएकी हुन् ।
पल शाह प्रकरणमा नाबालिगको पक्षमा अभिब्यक्ति दिएकी रेखाले यो बिषयमा चोकचोक र गल्लीगल्लीमा न्यायाधीश र वकिलहरु जन्मिरहेको बताएकी छिन । उनले गल्लीगल्लीमा न्यायाधीश जन्मिएको भन्दै अदालतको काम भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेकी छिन । उनको अभिव्यक्तिपछि पलका प्रशंसकहरु उनीमाथि खनिए। कतिले गालीगलौज गरे भने कतिले उनलाई श्रद्धाञ्जली नै दिए ।
उनले अगाडी थपिन – ‘महिलालाई तिमीहरू सहेर बस, तिमीहरू नै खराब भन्ने खालको सोच देखियो । जसलाई हिंसा परेर बाहिर निस्केको हुन्छ, त्यै खराब भन्ने होला त ? चेतनाको स्तर कहिले बढ्छ हाम्रो ? महिलालाई श्रृंगारिक वस्तुको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेर हुन्छ त ? हामी नडराउँ । म नेताको विरुद्धमा पनि जान सक्छु यदि गलत छ भने ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा ‘सडक बहस’ गरेको हो । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित सडकमा ‘महिला : हिजो, आज र भोलि’ विषयमा सडक बहस भएको हो ।-इबिहानीपत्रिकाबाट।
Prevनायक पल शाह प्र’ करण बारे बोल्दै वरिष्ठ कलाकार बसुन्धराले हात जोड्दै गरिन यस्तो अ’ नुरोध (हेर्नुस् भिडियो सहित)
Nextपल शाहलाई ब’ यानका लागि यसरी वकिल कार्यालय गैडाकोट पुर्‍या’ इयो (भिडियो हेर्नुस्)
कसले उढायो ‘ए मेरो हजुर ४’को ट्रेलर र गीत ?